Izu ole na ole na HomePod: nke kacha mma ka ga-abịa | Akụkọ akụrụngwa
Izu ole na ole na HomePod: nke kacha mma ka ga-abịa
Izu abụọ gara aga Apple kwadoro HomePod, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị na United States, United Kingdom na Australia. Nhapụ a kpaara aka maka ihe ụlọ ọrụ na-eme n'oge na-adịbeghị anya, nke ahụ na-enye ọtụtụ n'ime anyị echiche na emeghachi omume na ụlọ ọrụ ọhụrụ atụmatụ nke anaghị launching ihe ngwa ngwa rue sọftụwia.
Ahụkebe ọdịiche pụrụ iche maka ọkà okwu nke ogo ya, mana ọ ka nwere sọftụwia ọhụụ ọhụụ dịkwa na Bekee naanị mee HomePod a ngwaọrụ nke nwere ezigbo omume n'oge a, mana nwere ọnụ ụlọ sara mbara maka imeziwanye. N'azụ nyocha mbu na ị pụrụ ịhụ na video na-esochi okwu ndị a, m na-agwa gị m echiche mgbe otu izu na-eji ọhụrụ Apple smart ọkà okwu.
1 Isda ka bụ isi, maka ugbu a
2 Get mara gị na njikwa olu n'oge
3 Pchịkwa HomeKit na HomePod m
4 Mana otutu imezi ihe
5 HomePod ka dị na beta
Isda ka bụ isi, maka ugbu a
Ndị na-ekwu okwu Smart ka nọ n'oge mmalite nke ihe ha nwere ike ịbụ. Nke a bụ etu ekwentị bidoro, ma ugbu a oku ekwentị bụ ihe kachasị mkpa ekwentị mkpanaka na-enye gị, opekata mpe maka ọtụtụ mmadụ. N'ezie enwere ụbọchị mgbe ị na-anataghị ma ọ bụ kpọọ oku ọ bụla, ma na ị na-eji ekwentị gị aga n'ihu. Nke a nwere ike ịbụ ihe a na-ahụkarị na ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na afọ ole na ole, mana anyị erubeghị ebe a.
Ya mere ige nti egwu di ok for e mkpa maka ezigbo ok speaker speaker okwu. Anaghị m ekwu maka egwu dị mma, maka na onye ọ bụla nwere mmasị ya, kama maka egwu ị masịrị gị nke kachasị mma. HomePod na-eji agba agba emezu ozi ahụ. Site na obere ya ka ọ na-ejupụta n'ime ụlọ ahụ niile na ụda dị mma, n'agbanyeghị ebe ị nọ. Ezigbo bass, ezi mids na ezigbo elu ... a na-ekesa ụda ahụ site na tweeters ya asaa na bass ọkà okwu ya na oke mma, yana A8 processor na ọ na-etinye aka na ụda ahụ n'ụzọ zuru oke.
Ọ ga-amasị m ịlele otu njikọ HomePods abụọ jikọtara, ihe a na-enweghị ike ịme n'oge ahụ mana nke ahụ ga-abịa na ngwanrọ ngwanrọ n'oge na-adịghị anya, ikekwe yana iOS 11.3, ikekwe site na oge HomePod dị na Spain na mba ndị ọzọ ugbua arụ ọrụ na-emejuputa atumatu. Mana n'oge a site na otu ọkà okwu m nwere ike ịsị na ọ karịrị oke, m ga-ekwu zuru oke, maka ụlọ buru ibu. Olu ya kachasị elu na-emerụ na ntị, mana anaghị agbagọ. Ọbụlagodi ogo ya dị elu nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọọ inye ndị agbata obi gị nsogbu ụra.
Get mara gị na njikwa olu n'oge
Ọ ghọọla ihe a na-eme iji tinye ikpe wee kpọọ Siri, nke ahụ dịkwa n'asụsụ Bekee ugbu a. Achọghị m iche n'echiche mgbe anyị nwere ike iji ya n'asụsụ Spanish, mana ugbu a, ụmụ m anụworị egwu ha site n'ịgwa Siri okwu, ha na-ajụ oge ma ọ bụ maka ihu igwe. Ọ bụ ihe ịga nke ọma inwe (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) inyefe ya na njikwa anụ ahụ, tinyere ihe ndị ọzọ n'ihi na n'ozuzu, ọ dịghị mgbe ọkà okwu na-anọ nso. Usually naghị etinyekarị ọkà okwu nso ebe ị nọ, yabụ gịnị kpatara anyị ji chọọ bọtịnụ ahụ?
HomePod na-enye gị ohere ijikwa olu, kwusi, bido na-egwu egwu, na-aga n'ihu na azụ site na ịpị aka n'elu, mana ozugbo m jiri ha maka vidiyo nyocha, anaghị m eji ha eme ihe ọzọ. Gwa Siri okwu dị irè karị, yana kwa mgbe ọ na-ege ntị ma na-anụ olu gị mgbe niile ebughi olu gị, anaghị m etinye otu ihe na usoro a. Anọwo m na-eji AirPods ihe karịrị otu afọ ma enwetabeghị m iji Siri na ha, mana na HomePod ọ dị iche, ọ dị ka ihe okike karịa ma ị megharịrị ngwa ngwa. Asụsụ Bekee ugbu a pụtara na ụfọdụ ihe ị na-aghọtaghị nke ọma, ma ọ bụ na e nwere ndepụta nwere aha na Spanish ị na-amataghị, mana a ga-edozi ya mgbe ọ dị n'asụsụ anyị, na-atụ anya n'oge na-adịghị anya.
Enweghị m ike imesi ike Siri na-ege gị ntị nke ọma. Na mbụ, ị na-ekwukarị okwu dị elu karịa otú o kwesịrị ịdị, ma nke nta nke nta ị na-achọpụta na ọ dịghị mkpa, ebe ọ bụ na ọ na-anụ olu gị karịa ka ị pụrụ iche. Ọbụlagodi na mkpọtụ dị n'ime ụlọ ahụ, telivishọn dị ma ọ bụ na ị na-ege egwu na HomePod, Siri na-ege gị ntị mgbe niile n’ebughi olu gị. Ruo n'ókè nke na ọbụna onye nwere obi abụọ m nwere ike iji dị ka "akara edo", ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị nwunye m, amalitelarị iji Siri gbanyụọ oriọna ụlọ mgbe anyị na-ehi ụra. Tupu m kwuo na ị ga-ekwusi ike ike na iPhone ma ọ bụ Apple Watch. Ule gafere.
Pchịkwa HomeKit na HomePod m
Iji chịkwaa ngwa ngwa dakọtara na HomeKit gị, ị ga-achọ Apple TV ma ọ bụ iPad (nke kachasị mma nke mbụ nwere nhọrọ nchịkwa ọzọ), mana ugbu a, anyị nwere ike itinye HomePod na ndepụta a. The Apple okwu na-aghọ a ọhụrụ Central maka ngwa dakọtara na Apple si n'ụlọ akpaaka n'elu ikpo okwu, na ya na-abịa ụzọ ọhụrụ ịchịkwa ha. Nghọta na Apple enyeghị Apple TV 4K ọhụrụ igwe okwu nke mere ka anyị nye iwu iji gbanyụọ ọkụ, lelee ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ jikọọ plọg ahụ. Anyị bụ ndị ohu nke iPhone ma ọ bụ Apple Watch anyị, nke ahụ mekwara ka olu olu ahụ ghara ịbụ ihe okike.
Apple jisiri ike weghara HomePod maka ihe abụọ. Apple TV abụghị ngwaahịa a ma ama na mpụga United States, ọ bụ ezie na ọbịbịa nke Netflix, HBO na Amazon Prime Video enyerela aka mee ka ngwaọrụ Apple mara karịa ebe ụfọdụ hụburu na ọ na-atọ ụtọ, a ka nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị ike doo onwe ha na € 200 Apple TV kwesịrị ya. Buyzụta Apple TV naanị iji chịkwaa HomeKit? Ọtụtụ na-ahụta ya dị ka ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche enweworị igwe onyonyo nke jikọtara ngwa ha chọrọ iji lelee usoro ha ma ọ bụ ihe nkiri ha.
Agbanyeghị, ihe nwere ike ịdị iche na HomePod. Ọkà okwu dị mma maka ige egwu na njiri mara mma yana nke ahụ na-enye gị ohere ịme dị ka etiti HomeKit nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ mechara kpebie ịzụta ngwa mgbakwunye dakọtara, a ga-etinyere otu ahụ n'ụzọ ọzọ ọtụtụ ndị ọrụ HomeKit nwere ike ịhụ ka ọkà okwu na-atọ ụtọ ijikwa plọg gị, bọlbụ na thermostats. Na ndị nrụpụta dịka Koogeek ma ọ bụ IKEA na-aga n'ihu ịpụta na ịmalite ngwaahịa ndị dakọtara na ọnụ ọnụ ọnụ ala ga-enyekwa aka.
Mana otutu imezi ihe
Mgbe anyị na-ekwu maka omume ọma nke HomePod, anyị enweghị ike ịgụnye akụkụ ya "amamịghe". Siri bụ onye enyemaka na-akwadoghị nke Apple na-emepe kemgbe ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na na iPhone anyị na-eme mkpesa ugbu a na ọ kwesịrị ịkwalite, na HomePod ọ bụ ụzọ dị anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na akwa. Ọ bụ eziokwu na ihe ọ na-eme, ọ na-eme nke ọma: ịchịkwa Apple Music, zipu ma gụọ ozi, Ajụjụ na ịntanetị dịka ihu igwe, afọ e wepụtara album ma ọ bụ tinye ndetu na ncheta. Ma mgbe ihe na-arụ ọrụ nke ọma, ịchọrọ karịa, na ebe a nsogbu na-amalite.
Ekwuola ọtụtụ ihe banyere usoro okike mechiri emechi nke Apple n'ihe banyere HomePod, na ọ naghị adaba na Spotify (ọ bụ ezie na ọ bụ, mana ọ bụghị site na njikwa olu) ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ nke atọ. Maka m ihe a niile bụ maka oge, ihe ga-akwụ ụgwọ. O doro anya na m bụ onye ọrụ Apple ma ya mere enwere m iPhone, iPad, Apple TV na m na-eji Apple Music, yabụ mmachi na ọrụ ndị ọzọ anaghị emetụta m nke ukwuu. Ma nsogbu bụ na Apple etinyewo mgbochi ọbụna na ọrụ ya na ngwa ya, na nke ahụ bụ enweghị nghọta.
Ozi, ndetu na ncheta, na mgbakwunye Apple Music, nke ahụ bụ ihe niile ị nwere ike iji ugbu a ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ngwa Apple. Na ihe dị ka isi dị ka ịjụ banyere ihe ndị mere na kalenda m? Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka egwuregwu, HomePod enweghị ike ịnweta ngwa Kalinda gị, ọ nweghịdị ike ịkpọ oku n'ekwughị iPhone gị. Ihe ị nwere ike ime na AirPods gị ma ọ bụ iji Apple Watch gị site na iji Siri ị gaghị eme ya na HomePodRedi Nwere obi ụtọ ma ọ bụ eziokwu. Apple chọrọ ịme Siri ọbụlagodi na HomePod ya, nke ahụ ga-abụrịrị maka ebumnuche anyị na-amaghị mana nke ahụ ga-edozi n'oge na-adịghị anya.
Ohere ndị HomePod na-enye gị buru oke ibu, ọbụghị naanị n'ime mpaghara egwu. Na mgbakwunye na ihe ọ na - eme (na m kwughachiri, ọ na-eme ya nke ọma) yana ihe doro anya ọ nwere ike ịme (dị ka mmemme kalenda, oku ma ọ bụ nyocha ndị dị elu na ịntanetị), ụwa nke ohere nwere ike meghee nke mere ka ị rọọ nrọ . Ọ na-eme m ka m jiri na ịnyagharịa Apple TV m na-enweghị imetụ Siri Remote, M na-amalite playback nke usoro ọkacha mmasị m site n'ịgwa HomePod m okwu, ma gbanyụọ ya n'otu ụzọ ahụ. Ọ bụ naanị ihe atụ nke ihe nwere ike ime n'oge na-adịghị anya, mgbe ọ bụla Apple chọrọ.
HomePod ka dị na beta
Nke bụ eziokwu bụ na HomePod ka na-emepe. Ikekwe ụlọ ọrụ ahụ abanyela n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa site n'eziokwu ahụ bụ na ngwaahịa ndị yiri ya adịlarị, dịka Homelọ Google ma ọ bụ Amazon Echo, ma ọ bụ Sonos na-eme ka ndị na-ekwu okwu ya ka mma ma na-agbakwunye ọrụ ọhụụ "smart" na ogo ya ama ama na ịchọ njide. akụkụ nke ahịa ọhụrụ a na-egosi. Ntọhapụ ejiri naanị mba atọ (UK, US na Australia) ma naanị na Bekee, mgbe Siri na-akwadorịrị ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ, yana obere njirimara ejiri ya tụnyere ihe Siri nwere ike ime na iPhone.
Ihe ịrịba ama niile na-egosi HomePod na emechabeghị, dị ka ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ ụlọ ọrụ wepụtara. Otu ihe a ka ekwuru banyere Apple Watch ọ bụghị ogologo oge gara aga, ọ na-agwaghị n'ekwupụta ọkwa ọkwa Applew smartwatch dị ugbu a, na-enweghị asọmpi n'ahịa a. HomePod ga-akawanye mma, enweghi obi abụọ, n'ihi na ọ bụ ohere Apple agaghị echefu. A na-ekwukarị na ọ kachasị mma ịzụta ọgbọ nke abụọ nke ọhụụ Apple ọ bụla, ekwetaghị m. Ọ ga-amasị m ịnụ ụtọ ndozi nke HomePod mbụ a ka ha na-apụta, ma ugbu a, enwere m obi ụtọ na ụda ya dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Izu ole na ole na HomePod: nke kacha mma ka ga-abịa
Twitter chọrọ ka anyị jiri ngwa ya maka ngwa mkpanaka ma na-achọ iru ebe ahụ
Nintendo Gbanye ga-enweta nchịkọta nke egwuregwu SNK